Jadwalka Joojinta Wakhtiga Xidhitaanka ee Android | War gadget
Xiritaanka saacaddu waa aalad xiise leh oo waxaan dib ugu eegnay munaasabad hore iyo inay naga caawisay inaan joojino howlaha ama ku amro kombuyuutarka inuu si otomaatig ah u damiyo waqti cayiman. Nasiib darrose, aaladdan looguma talagalin aaladaha gacanta ee Android, in kastoo hadda aan helnay magac aad u xiiso badan oo aad u adeegsan karto ujeeddadan.
Si kale haddii loo dhigo, haddii aad haysato qalab mobiil ah oo leh nidaamka hawlgalka Android, waad awoodi kari lahayd isticmaal Xilliga Xiritaanka si aad u amarto inuu xirmo waqtiga aad rabto, in kastoo, ay jiraan fursado kale oo dheeri ah oo aad isticmaali karto iyadoo kuxiran baahidaada.
Sida loogu diyaariyo Xiritaanka Waqtiga barnaamijkeena 'TV-Box'
Markii hore waa inaan cadeeynaa in taleefannada gacanta iyo moodellada qaar ee kiniinnada leh nidaamka hawlgalka Android laga bilaabo 4.0 iyo wixii ka dambeeya ay leeyihiin shaqo xiiso leh qaabkeeda taas oo u oggolaanaysa adeegsadayaasheeda inay damiyaan aaladda waqti cayiman, si aysan u sii wadin isticmaalka batterigeeda. Nasiib darrose, shaqadan lagama helin qaabeynta gudaha ah Android TV-Box, marka waxaan daruuri ubaahanahay inaan isticmaalno Shutdown Timer, oo ah codsi Android ah oo aad toos ugala soo bixi karto Google Play Store.
Ka dib markaad soo dejiso oo aad maamusho Xiritaanka Waqtiga, barnaamijka Android markii ugu horeysay waxay ku weydiin doontaa rukhsad superuser, oo ay tahay inay siiso iyaga si ay ugu shaqeyso mudnaanta maamuleyaasha; maaraynta ayaa ah mid aad u fudud oo fudud, maadaama adiga kaliya lagaa doonayo qeex waqtiga saxda ah ee aad rabto inaad si toos ah u damiso kooxdaada, taariikhda waa in lagu daraa macluumaadkan. Qeybta hoose ee daaqada waxaa jira xulashooyin aad damin karto, dirid si aad dib ugu bilowdid, inaad ku dhex seexato xulashooyinka kale ee ay tahay inaad ku doorato hadba baahidaada Waxaa laga yaabaa inay mudan tahay in laga faaloodo haddii aan u baahanahay qalabka in maalin walba la demiyo waqti go'an waa inaan jadwal u dhignaa maalin kasta, maadaama aysan jirin wax shaqo ah oo naloo oggol yahay inaan ku dooranno "maalin kasta" usbuuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Sida loo barnaamij ka joojinta barnaamijkeena TV-ga ee 'Android TV-Box' oo leh Xiritaanka Saacadda
Waad salaaman tahay: Waxaan haystaa tv-ga kiniiniga ah, ama sanduuqa tv-ga, waxaan helay dhowr batoonno widget ah si aan u xiro shaashadda iyo wifi iyo kuwa kale, dhibaatadu waxay tahay waxaan isticmaalaa jiir wireless-ka ah iyo barnaamijyadaas oo kaliya ayaa damiya shaashadda. jiirku wuu dhaqaaqaa, voila, sanduuqa tv-ga ayaa markale la hawl geliyaa ...
Su'aashaydu waxay tahay haddii ay jiraan wax looga tagayo sanduuqa tv-ga oo taagan, si ay u hawlgasho markii aan jiirka ku riixo furaha oo aanan si fudud u dhaqaajin, haddii kale markasta waa inaan damiyaa aaladda, iyo wixii Waxaan ubaahanahay inaan doorbido inaan ku xiro badhanka daminta halkii aan ka heli lahaa barnaamijyada waqtiga.
Waa wax aan in badan raadiyay, iskaga tag heeganka laakiin ma awoodo, laga yaabee maxaa yeelay qalabka aan u maleynayo in lagu wado in la joojiyo qaabka ama shaashadda qufulka, sababtuna waa tan dambe sabab macquul ah maadaama ay la jiri laheyd amarka ah in aysan macquul aheyn dhigay tusaale ahaan tusaale ahaan, ama jiirku uusan sii shaqeyn doonin, iwm.
Sikastaba, ma aqaano, kaliya waxaan weydiinayaa inay jiraan wax la mid ah.
Sida loo dhejiyo Recycle Bin Windows 10 Taskbar
Trick si aad u geliso fiidiyow YouTube ah oo si toos ah loogu ciyaaro